I-China Qalisa ukuNceda iYoga yokuNikezela ngeYoga yeContraction Band yokuThengisa kunye neFektri | Yiya
Izinto zokuQala zoNcedo lweyoga zoncedo lweYoga yeContraction Band
Iibandage zeYoga zikwabizwa ngokuba ziintambo zeyoga, ezinganyibiliki. Abanakunceda kuphela ukolula amathambo kwaye bandise ixesha lokuhlala, kodwa banokusetyenziselwa ukubopha umzimba ngebhanti yokuphakamisa, ukuze izandla zombini zikhululeke ukwenza ukolula. Xa uziqhelisa ukugoba esinqeni okanye ukunciphisa umlenze, inokusetyenziselwa ukuphakamisa unyawo okanye amandla esinqeni okuthwala!
Igama lemveliso: Ibhendi eyoluliweyo yeyoga
Izinto zeMveliso: I-100% yomqhaphu + ipholiyesta ephezulu yelastiki
Ubungakanani beMveliso: 183 * 3.8cm; 245 * 3.8cn
Umbala: Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, omfusa ngokukhanyayo, omfusa ngokunzulu, omnyama, oluhlaza okweziqhamo, oluhlaza okomkhosi, wavela wabomvu, pinki, no-orenji
Ukucaciswa: 183 * 3.8cm 245 * 3.8cn (ezinye iinkcukacha zinokwenziwa ngokwezifiso)
Ukupakisha: ifilimu efudumeleyo eshushu, iphepha lesinqe elitywiniweyo, ifilimu ye-OPP, ibhokisi yephepha, umaleko webhokisi engaphandle enamathele
Umgangatho: I-100% yomqhaphu + ipholiyesta ephezulu yelastiki
Ulwenziwo Iinkcukacha ezahlukeneyo, imibala, kunye nokuprinta i-LOGO kunye neepateni ezahlukeneyo zingenziwa ngokwezifiso
Isiqinisekiso: Imveliso iphumelele i-SGS, i-6P yokuvavanywa kokuvavanywa kwendalo
Imibala eqhelekileyo yemveliso imi ngolu hlobo lulandelayo: luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza okwesibhakabhaka, msobo okhanyayo, mfusa mnyama, mnyama, iziqhamo eziluhlaza, umkhosi oluhlaza, wavuka wabomvu, pinki, orenji.
Iimveliso zizithonga zokwenyani, zibonisa imbonakalo yoqobo, kwaye zityebile ngemibala. Imibala eyahlukeneyo yamakhadi ombala wePatone inokwenziwa ngokukhawuleza njengoko kufuneka.
Umsesane weklasikhi, owomeleleyo, ococekileyo, okhuselekileyo nohlala ixesha elide
2mm ubukhulu, amandla eqine, izinto ipholiyesta, eqine ethambileyo
IYoga yolula imitya ngokubanzi ibizwa ngokuba ziintambo zeyoga, ezinganyibiliki, ngaphandle kokunceda izihlunu namathambo ukuba olule kwaye wandise ixesha lokuhlala;
Unokusebenzisa umtya wolule ukubopha umzimba kuloo ndawo, ukuze izandla zombini zikhululeke kwaye zolulwe kumxholo wentliziyo yakho. Kungcono ukhethe olu hlobo lodidi oluphindwe kabini kwimitya eyoluliweyo.
Xa abaqalayo bengaqhelananga nentshukumo yeyoga ngokubanzi okanye bengenakho ukufezekisa imisebenzi yokuhamba, banokuba luncedo ngakumbi ukuba badibanisa izixhobo ezincedisayo kunye nokukhokelwa ngutitshala weyoga!
Xa uziqhelisa ukugoba esinqeni okanye ukwandiswa komlenze, inokusetyenziselwa ukuphakamisa iinyawo okanye ukuthembela esinqeni.
Egqithileyo Iibhola ze-yoga ze-peanut ezingashukumiyo ezingashukumiyo
Okulandelayo: Ukutshitshiswa kwe-intshi ezingama-26 ukufunxa ibhayisikile yasentabeni
Ibhendi yokwolulwa kweyoga
I-yoga yolule ibhendi ngokwezifiso
I-Yoga Stretch Band Ihowuliseyili
iphazili yomthambo, Ingxowa yeYoga yokuHamba, Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, Ingxowa yeYoga yeSling, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba, I-Yoga Mat enetawuli ephezulu,